पैसा खर्च किन ? अब आफैं बन्नुस् मोबाइल मेकानिक !
स्मार्टफोनको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रयोग जति बढ्दैछ, समस्याहरु पनि उत्तिकै जन्मिँदैछन् । मोबाईल ह्याङ हुने, रिस्टार्ट भइरहने, पासवर्ड बिर्सिनेजस्ता समस्याहरुले तपाईंलाई अक्सर सताइरहेको हुन्छ । यस्ता समस्या आएमा साधारणतया युजरहरुले फोनको डाटा डिलिट गर्ने, फोन रिस्टार्ट गर्ने अझै भएन भने फ्याक्ट्री रिस्टोर गर्ने गर्दछन् ।